Ebube Kid |
Kid oche, obere oche 1618 ...
Plastic oche F805 #
Nkebi Nkebi: F805 #
Nha ngwaahịa: 55 * 48 * 82.5cm
Ihe: Eco-friendly Polypropylene + Metal
Ngwugwu: 4pcs / ctn
MOQ: 200pcs / agba
Chelọ oriri na ọụ Cheụ ndị na - ekpo ọkụ n'ogige ụlọ - Pụrụ Iche Pụrụ Iche maka China China Plastic PP Restaurant Kọfị Bar
Resprụ Ọrụ Dịịrị magburu onwe ya na mma n'aka fim guzo bụ ụkpụrụ anyị, nke ga-enyere anyị na a n'elu-ogo ọnọdụ. Hergbaso kwupụta echiche nke “àgwà mbụ, asịwo kasị” maka Special Price maka China Modern Plastic eyi Restaurant Coffee Bar oche, Anyị na-ekwe nkwa quality, ma ọ bụrụ na shoppers bụghị obi ụtọ na ngwaahịa 'elu-edu, ị nwere ike ịlaghachi n'ime 7days na mbụ ha na-ekwu. Resprụ Ọrụ Dịịrị magburu onwe ya na mma Ebe E Si Nweta fim guzo anyị ụkpụrụ ...
Ọhụrụ abịa Upholstered Na-eri nri Room oche - Plastic oche 1681 # - Forman
Isii ego Isiokwu Isiokwu - Isiokwu Nri-T6 - Forman
Ngwaahịa ahụ na-agwakọta n'etiti narị afọ nke oge a na ụdị ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke nwere usoro imepụta ugbu a iji mepụta iberibe oge na-adịghị mma nke ga-eto ihe ịchọ mma ọ bụla. Ngwaahịa a, Osisi Osisi siri ike, na White na-enye mmetụ ọgbara ọhụrụ ka ị rie ebe a na-esi nri na kichin, ma ọ bụ ebe ọ bụla ebe a chọrọ tebụl ngwoolu. The elu ọgbara ọhụrụ sleek ọcha osisi n'elu-agwakọta seamlessly na ihe ọ bụla ihe ndozi mgbe tebụl ụkwụ na-mere nke siri ike eke osisi na atụmatụ kemeghi n'ala glides na-ekwe ka ị nọrọ larịị na un ...
Ogologo maka oche dị ọnụ ala - oche plastik - 1765 # - Forman
Ad Anyị Uru: Anyị nwere patent asambodo nke ọtụtụ n'ime anyị. Anyị nwere ike ịnye akụkọ nyocha EN12520 maka ngwaahịa ọ bụla. OEM iji dị. Anyị factory nwere BSCI na SGS asambodo. Akpanaka mmepụta noo. Akwa mma & Kachasị Mma Ọrụ & Ezigbo Ahịa ● Factlọ Ọrụ Anyị & Otu: Tianjin Forman Ngwá ụlọ bụ ụlọ ọrụ na-eduga n'etiti north China nke etinyere na 1988 tumadi na-enye oche iri nri na tebụl. Forman nwere ndi otu ahia buru ibu karie 10 ndi oru ...
OEM Emeputa oche - Plastic oche - F803 # - Forman
A pụrụ ịdabere na ya soplaya White Nri Isiokwu Set - Nri Isiokwu-T2 - Forman
Tianjin Forman Ngwá ụlọ bụ ụlọ ọrụ na-eduga n'etiti ebe ugwu China nke guzobere na 1988 na-enyekarị oche iri nri na tebụl. Forman nwere ọtụtụ tebụl ụlọ iri nri mara mma na-enye. Ma ị na-achọ imewe ọgbara ọhụrụ nke nwere ike ịdaba na obere ime ụlọ, ma ọ bụ nnukwu, tebụl ọdịnala nwere ohere maka ezinụlọ dum na ndị ọzọ, na Forman, a ga-emebi gị maka nhọrọ. Tebụl iri nri bụ otu n'ime arịa ụlọ kachasị mkpa n'ụlọ gị - ọkachasị gburugburu ho ...
Ihe kacha mma mma iko na kọfị kọfị kacha mma - okpokoro okirikiri, obere, 2 agba T-32 # - Forman
Tebụl dị gburugburu na-agwakọta ọdịdị dị mma yana arụmọrụ ma dị mfe. Onye mmebe chọrọ imepụta tebụl enyi na enyi, na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide nke na-egbochi iko kọfị ka ọ daa n'ala - ọ bụ ya mere o ji kee obere onu gburugburu tebụl ahụ. Sizesdị tebụl dị iche iche jikọtara ọnụ n'ụzọ dị mfe ma dịkwa oke mma n'onwe ha.
Directlylọ ọrụ ozugbo oche nri ngwa ngwa - oche oche-1698 - Forman
Oche a site n'aka onye mmebe ama ama kariri naanị oche oche plastik nwere ọdịdị dị iche iche nke oge a. N'ihi ọnọdụ ọzọ na-aga n'ihu, ọ na-enyekwa oche ergonomic. Oche a nwere ọtụtụ agba. Enwere ike ido ya ma nwekwaa 100% recyclable. Ọ dịghị onye, ​​mgbe ị na-elele oche oche rọba Forman, nwere ike ịkọ nkọ maka teknụzụ a ga - eme iji mee ka mpempe akwụkwọ a bụrụ eziokwu. Nnennen edoghi jikọtara na ọcha akụkụ mak ...
Hot ire Black Glass Kọfị Tebụl - A Gburugburu Isiokwu, Obere, 2 Agba T-32 # - Forman
OEM / ODM China oche maka ime ụlọ erimeri Oge a - Oche ite - 1682 # - Forman
Mmadụ Bịa na ntụrụndụ.Design bụ Mkpụrụ Obi maka oche Plastic. Oche a nwere ahịrị ndị mara mma na nke ọdịnala nke na-eme nkwupụta n'ejighị ohere ahụ. jikọọ oche nri a na tebụl iri nri ọ bụla maka ebe a na-eri nri, ebe a nụchara anụcha na ebe iri nri, nke kachasị mma, nke kachasị, ihe anyị anaghị amịkọ mmiri ma wepu unyi na akwa, na-eme ka ikuku dị ọcha. Enwekwara ike zụta nkewa iche iji mụbaa setịpụ gị ọzọ. Nyochaa usoro ngwaahịa a iji hazie agwa bea ọzọ ...
2020 China New Design Garden oche n'èzí - Ahịa pụrụ iche maka China Oge Plastic PP Restaurant Coffee Bar oche - Forman